दाइजो लिन नमान्ने बेहुलालाई एक लाखको पुस्तक उपहार ! - Khabar Nepali
होमपेज / साहित्य / दाइजो लिन नमान्ने बेहुलालाई एक लाखको पुस्तक उपहार !
जब उनी जन्ती लिएर बेहुली लिन पुगे तब युवा आश्चर्यमा परे । त्यहाँ उनकी हुनेवाला श्रीमतीले श्रीमानका लागि खास उपहार लिएर उपस्थित भइन् । बेहुलीले त्यो दाइजो नभएर उपहार भन्दै दुलाहलाई स्वीकार गर्न बाध्य पारिन् । वास्तवमा त्यो उपहारमा अरु केही नभएर एक हजार वटा किताब थियाे । जसको मूल्य एक लाख भारतीय रुपैयाँ पर्ने समाचारमा उल्लेख छ । एजेन्सी
#दाइजो # किताब उपहार